यसरी मिल्यो पावर ‘सेयरिङ’, कुन पद कसलाई ? हेर्नुहोस् – Setosurya
काठमाडौं : एमाले-माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको सहमतिसँगै सत्ता सञ्चालनका भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् । दुवै वाम पार्टीले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म पदीय भागबन्डा आपसी समझदारीमा टुंग्याइएको दुवै पार्टी नेताहरूले बताएका छन् ।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषाल कसैलाई दोहोर्‍याउने÷नदोहोर्‍याउने कुनै सहमति नभइसकेको बताउँछन् । उनले भित्री र बाहिरी दुवै रूपमा पार्टीगत सहमति नभएको बताए । ‘गुट अनुसारका इन्टे«स्ट मुखरित भइरहेका नाम हुन्, अहिले आइरहेका । पार्टीले त्यसरी छलफल गरेको पनि छैन, संस्थागत निर्णय हुन बाँकी नै छ । छिटै निर्णय हुन्छ’, उनले भने । एमालेभित्र अर्थमा र माओवादीभित्र गृहमा धेरै नेता आकांक्षी देखिएका छन् । अर्थमा एमालेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्मले रुची देखाएका छन् । माओवादीभित्र गृहमा रामबहादुर थापा, वर्षमान पुनदेखि जर्नादन शर्मासम्म आकांक्षी छन् ।
काँग्रेस उपसभापतीले राजिनामा दिएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला !
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको वार्तामा मधेसी मोर्चा गएन
पार्किङ गरेर राखिएको बसमा आगो लाग्यो